မော်လာနာပသီကျော်ဦး-” မေးစရာမလိုသည့်မေးခွန်း၊ ဖြေစရာမလိုသည့်အဖြေ” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« In Politics there is No Permanent Friends or Enemies, Only Permanent Interests.
သွေးနဲ့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ နိုင်ငံသားစနစ် နာဇီတွေ ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေနဲ့ တူနေပြီလား? »
မော်လာနာပသီကျော်ဦး-” မေးစရာမလိုသည့်မေးခွန်း၊ ဖြေစရာမလိုသည့်အဖြေ”
လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းဖြိုခွဲမှုတွင် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ဂရုဏာသက်လျက် ရှိကြပေသည်။ တစ်ပြည်လုံးမှ အလှုရှင်များက မိမိတို့တတ်နိုင်သ၍ ငွေကြေးနှင့် ဆေးဝါးရုပ်ဝတ္ထုများကိုလှုဒါန်းလျက် ရှိကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ရခိုင်ပြည်ကဲ့သို့ အဝေးအလံမှ အလှုရှင် များလည်း ပါဝင်နေပေသည်။ ထိုအခါ မန္တလေးမြို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အလှုရှင်များကလည်း လူမျိုးဘာသာ ခွဲခြားနေရမည့်အချိန် မဟုတ်တော့ကြောင်း သဘောပေါက်နားလည်ပြီး ဒဏ်ရာရသံဃာတော်များနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များ ဆေးဝါးကုသရန် တတ်အားသရွေ့ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ပေသည်။
ဤတွင် အစ္စလာမ့်တရားတော်အရ ထိုသ်ို့ လှုဒါန်းခြင်း ပိုင်၊ မပိုင်မေးခွန်းများ မေးမြန်းကြသည်ဟု ကြားသိရပေသည်။ အမှန်စင်စစ် ထိုမေးခွန်းများသည် မေးရန်မလိုသည့် မေးခွန်းများ ဖြစ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လက်ပန်တောင်းတောင် အရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်လျက် ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်မ်များသည် ဤအရေးကို ဥပက္ခောပြု လျစ်လျှုရှုရန်ဆိုသည်မှာ မည်သို့မျှ မဖြစ်သင့်ပေ။
အစ္စလာမ်ဘာသာအရ သာမန်လူတစ်ယောက် ရောဂါဘယဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးကုသရန် လိုအပ်လျှင်ပင် လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲ အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီရမည့် ဝတ္တရား ရှိနေပေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးဝါးကုသရန် သို့မဟုတ် အခြား လူမှုရေး အကူအညီပေးရန်ဆိုသည်မှာ ပို၍ပင် အရေကြီးသော တာဝန်ဝတ္တရား ဖြစ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် အများစု ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်များဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့လုပ်နေသည့်အလုပ်မှာ ဘာသာရေး အဓိက မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံး ပိုင်ဆိုင်သော သယံဇာတများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုလျှင် လက်ပံတောင်းတောင်အရေးတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိသော ရဟန်းရှင်လူများအားလုံးသည် တစ်မျိုးသားလုံး ပိုင်ဆိုင်သော အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မိမိတို့အားလုံး မှီတင်းနေထိုင်ရာ နယ်မြေဒေသ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးတည်းဟူသော အရေးပါသည့် တာဝန်ကြီးကိုလည်း ထမ်းရွက်လျှက် ရှိကြလေသည်။
သို့ဖြစ်ရာ မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့သည် လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအပါအ၀င် မှက်မှောက်ခေတ် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ပင်မရေစီးကြောင်းကြီးတွင် တစ်အပ်တစ်အား ပါဝင်ကြဖို့ အရေးကြီး လိုအပ်လှပေသည်။ လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဒဏ်ရာရသော ရဟန်းရှင်လူများကို ဆေးဝါးကုသရန် အကူအညီ ပေးခြင်းအား အစ္စလာမ့်တရားတော်အရ ခွင့်မပြုသယောင် ပြောဆိုသူများ၏ အပြုအမူသည် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသည်နှင့်အမျှ မြန်မာမွတ်စလင်မ် လူ့အစုအဝေးတစ်ခုလုံးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်လည်း ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးများတွင် ထိုကဲ့သို့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုများ မရှိခဲ့သည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေးဇူးတော်ပင်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အစ္စလာမ်၏ စစ်မှန်သောလမ်းစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးများအား ညွှန်ပြတော်မူခဲ့လေသည်။
သမိုင်းတလျှောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးများသည် အစ္စလာမ်၏ သဘောထားကြီးမှုကို ပီပြင်စွာ ဖော်ကျူးခွင့်၊ ကျင့်သုံးခွင့် ရရှိခဲ့လေသည်။ ဆရာကြီးဦးနုဆိုလျှင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့၏ ကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ် လူတိုင်း အသိအမှတ်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆရာကြီးသည် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအတွက် အမြဲထာဝရ အကျိုးပြုနေသည့် သာသနာ့စာပေများကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်ယူခဲ့သည့် စာပေပညာဖြင့် ရေးသားပြုစုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ဆရာကြီးဦးနုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘိုးဘေးအများစုသည် ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးဖြင့် ကြီးပြင်းခဲ့ရသူများ ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ၏ အဘိုးနှစ်ဦး (အဖေ၏ အဖေနှင့် အမေ၏ အဖေ) စလုံးသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့ရသူများ ဖြစ်သည်။ သို့သာမက စာရေးသူ၏ အဓိက ဆရာသခင် နှစ်ပါးဖြစ်သည့် ဟဇရသ် မော်လာနာတွာစီးန်နှင့် ဟဇရသ်မော်လနာ အဗ်ဒုလ်ဟကင်းမ်တို့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားများဖြစ်ကြောင်း၊ သူတို့ကိုယ်တိုင် အမြဲ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလေ့ရှိပါသည်။ အလျဉ်းသင့်သဖြင့် ဤနေရာတွင် မော်လာနာ ဦးလှမောင်အကြောင်းလည်း ဖော်ပြရပါမည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က မန္တလေးမြို့နှင့် အခြားဒေသများတွင် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေး အဖျက်အမှောင့် လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းအချိန်မှာ မော်လာနာဦးလှမောင်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အခြေအနေ တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ မော်လာနာဦးလှမောင်၏ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မလိုလားသူများကပါ အသိအမှတ် ပြုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဆရာကြီးသည် ထိုကိစ္စအတွက် ကာဖိရ်ဖသ်ဝါပေးခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ဆရာကြီးက ထိုကိစ္စအတွက် မိမိကို ကာဖိရ်ဖြစ်ကြောင်း ဖသ်ဝါပေးလာသူများအား မိမိက ဘုန်းကြီးများကို ဆွမ်းကျွေးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုခွေကို အထောက်အထားအဖြစ် ထောက်ပြပြီး၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လုပ်ရပ်ကြောင့် ကာဖိရ်ဖြစ်တာလဲဟု ပြန်လှန် မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က မော်လာနာဦးလှမောင် မေးမြန်းခဲ့သော မေးခွန်းကို ဖြေနိုင်သူ မရှိခဲ့ပါ။ တစ်သက်တစ်ခါ မလုပ်ဘူးသည့် အလုပ်ကို လုပ်ရခြင်းဖြစ်သဖြင့် အပြစ်ဂိုနဟ် မကင်းနိုင်သည်ကို မကင်းနိုင်သည်ကို ၀န်ခံရပါမည်။ သို့သော် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ကာဖိရ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုရန် အတွက်မှာ အထောက်အထား ခိုင်လုံရန် အရေးကြီးလှပါသည်။ ယခုမူ ထိုကိစ္စသည် သမိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ။
မော်လာနာဦးလှမောင်အား ပေးခဲ့သော ကာဖိရ်ဖသ်ဝါသည် သမိုင်း၏ အမှိုက်ချင်းထဲ ရောက်သွားပါပြီ။ သို့သော် မော်လာနာဦးလှမောင် စတင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သည့် လမ်းမှာ ယနေ့ ကျွန်တော်တို့ မလွှဲမသွေ လျှောက်ရတော့မည့်လမ်း ဖြစ်နေပါပြီ။
မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့သည် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ အေးချမ်းသာယာစွာ နေထိုင်လိုသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ကြရပါမည်။ တဖန် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်မည်ဆိုပါက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ကင်း၍ နေလို့ မရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အဆုံးအမသည် နက်ရှိုင်းစွာ နေရာယူထားသည့်အလျောက် ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ သြဇာ၊ အာဏာ၊ အခန်းကဏ္ဍမှာလည်း ကြီးမားပါသည်။ အကယ်၍သာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများက မြန်မာ့မြေတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်ကို ရှေးခေတ်အခါများက သဘောထားကြီးကြီးနှင့် ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိပါက ယနေ့မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ ယခုလို အုံနှင့်ကျင်းနှင့် ရှိနေမည် မဟုတ်ပါ။ ဤလက်တွေ့ကျသော အရှိတရားကို လက်ခံမည်ဆိုလျှင် များမကြာမီက လမ်းများပေါ်တွင် အိုအိုင်စီဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ရောပါလာသည့် အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သံဃာအားလုံးကို ကိုယ်စားမပြုကြောင်း သဘောပေါက်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာမွတ်စလင်မ်များအတွက် လက်ရှိအခြေအနေတွင် တခြား ရွေးချယ်စရာ လမ်းတစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း ရှေးသမိုင်းများကရော၊ အနီးကပ်သမိုင်းကပါ ညွှန်ပြလျှက်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါပြီ။
ဖုန်း – 09 444 011 806
This entry was posted on December 15, 2012 at 10:38 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.